SARY - Neny tao amin'ny Ekar Ambohitrimanjaka 19 jona SARY - NENY TAO ANTSOHIHY 15 JONA SARY - DIAN'iNENY TAO ANDRANOMAMY 15 JONA Sary - Dian'i Neny tany Antanifotsy, 10 jona Sary - Neny tany Faratsiho Mai 2013 - Rapport d'AMNESTY INTERNATIONAL - Madagascar 24 mai 13 - Argumentaires sur la candidature de Mme RAVALOMANANA 21 MAI 13 - Lettre adressée au CPS par la Mouvance RAVALOMANANA Recherche	Medias Antson'ny Filoha Marc Ravalomanana 02-Jan-2013
Jeudi, 20 Juin 2013 08:24 ince avanafil is needed pro re nata, a person likely to end up on a dosing schedule generic vs brand viagra HIV or AIDS medications such as darunavir Prezista, efavirenz Sustiva, etravirine Intelence, nevirapine Viramune, fosamprenavir Lexiva, indinavir Crixivan, ritonavir Norvir, Kaletra, as well as others or viagra buy online to where from a cup a joe i had been fine tadalafil price best. argaiv1361
“…tsy azo sandaina vola aho…” Niarahaba ny vahoaka malagasy sy ny mpitaky ny ara-dalàna, ny mpiaro zo amankasin'ny zon'olombelona, ny malagasy tsy misy ankanavaka na aiza misy azy na aiza, ny filoha Marc Ravalomanana androany tolak'andro tamin’ny antso mivantana teo amin’ny kianjan’i Magro. Enga anie hoy izy ity taona 2013 ity ahafahantsika mandala ny demôkrasia izay takian'ny firenena eran-tany mba ampanjaka ny rariny eto Madagasikara. Tonga hoy izy ny fotoana andinihina ny fahasahiranana manjo ny malagasy ka hihaino ny feon'ny fieritreretany satria nataon'Andraimanitra afaka andala ny fahafahana sy mivezivezy ny olombelona, noho izany isika eto Madagasikara dia tokony hanaja izany zon'ny maha-olona izany. Miarahaba ny vahoaka malagasy aho hoy izy noho izany faharetana fitakiana ny ara-dalàna izany, toa izany koa ny hafanam-po sy ny afom-pitiavana, mba ampanajàna ny demôkrasia eto Madagasikara. Lire la suite...
Antson'ny filoha Marc Ravalomanana, 08-Dec-2012
Jeudi, 20 Juin 2013 08:24 "...eo ampiandrasana ny fanambaràna ofisialy avy any Dar-Es-Salam,ataon'ny Sadc dia matokia fa tsy maintsy ho tonga aty Madagaikara aho!" Hitohy... Antson'ny filoha Marc Ravalomanana, 01-déc-2012
Jeudi, 20 Juin 2013 08:24 "...tsy hisy fifidianana eto Madagasikara raha tsy tafaverina eto Madagasikara ny filoha Marc Ravalomanana!" "Vaovao mikasika ny raharaha politika no lazaiko aminareo" hoy ny filoha Marc Ravalomanana androany raha niditra nivantana an-telephone tamin'ny vahoaka tao amin'ny Magro izy." Amin'ny herinandro dia hisy fivoriana ka manantena fa hisy zava-dehibe ho lazaina aminareo. Matoky sy manantena fa hamaha-olana ny Sadc sy ny Troika.Tsy manaiky mihitsy isika izany hoe "ni ni" izany. Lazao hoy izy fa tsy ao anatin'ny vohabolan'ny demokrasia izany "ni ni" izany. Homena ny vahoaka ny safidy malalaka ary izy ihany no manendry izay olona tiany hitondra azy. Mazava ny safidy omena ny vahoaka. Mampita hafatra hoan'ireo manely tsaho ary tano hoanareo irery izany "ni ni " izany. Tandremo amin'ny fandemen-tsaina. Ny art. 20 dia efa mazava ka matokia fa ny marina tsy mba maty. Mampahery anareo aho hoy ihany izy tamin'ny kabariny ary tsy hamadika mihitsy ny vahoaka malagasy aho mandra-pahafatiko. Manome vaovao ho anareo aho amin'ny herinandro ary tsy hisy mihitsy fifidianana raha tsy tafaverina eto Madagsikara ny filoha Marc Ravalomanana.
Antson'ny Filoha Marc Ravalomanana, 10-nov-2012
Jeudi, 20 Juin 2013 08:24 "...mampahery anareo mpitarika aho mba tsy harivo salosana!"Niditra mivantana an-telephone androany tolakandro ny filoha Ravalomanana ary nanamafy ny efa nolazainy tamin'ny farany : "tsy maintsy tafaverina aty Madagasikara aho na ahoana na ahoana. Aza manana ahiahy na mitebiteby satria efa nolaniana ny fampiarana ny tondrozotra ary tsy misy miverina amin'izany intsony. Ampiaro ara-bakiteny izay nifanarahana ary tsy misy izany hoe ao anaty enim-bolana izany fa fifanarahana politika no mitondra io". Ny fampiarana ny tondrozotra dia mitaky demokrasia ka tokony halalaka ny fanehoan-kevitra, tsy tokony enjehina ny fanaovan-gazety. Tsy mbola tanteraka ny fifanekena satria toa izany koa ireo gadra politika izay mboa tsy novotsorana. Tsy izaho no tsy te hody fa sakanana ary tsy izany no voamarika ao anaty tondrozotra.Tsy maintsy tanterahana ny fifidianana ara-demokratika, avelao hilatsaka izay te hilatsaka, avelao ny vahoaka hisafidy izay tiany hitondra ny fireneny. Ny fanapaha-kevitra noraisin'ny Troïka no ahatafita ny raharaha ara-politika aty Madagasikara. Niantso ireo mpitarika izy teo ampamaranana, ny ampahery ny malagasy, mba tsy hanaiky ataon'ny sasany fitaovana.Ny teny farany avy amin'ny filoha Ravalomanana : "Tsy tolona ho ahy no atao fa tolona hoan'ny Malagasy!". Antson'ny Filoha Marc Ravalomanana 27-oct-2012
Jeudi, 20 Juin 2013 08:24 ...Manambàra amin'ny fomba ofisialy aho fa hirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena ary tsy hihemotra amin'izany! Nanombohany ny kabary androany dia ny fitondràna fampiononana hoan'ny fianakavian'izay mana-manjo, izay no maha-malagasy, koa mamangy ny fahoriana hoan'i Rajoelina sy ny fianakaviany aho hoy izy.
Tsy maintsy ho tafaverintsika ny hasin'ny firenena !
Antson'ny Filoha Marc Ravalomanana, 16-07-2012
Kianjan'ny finoana 26 jona 2012
Manoela : Tsy ho eny Iavoloha raha tsy tonga eto ny Filoha Ravalomanana
Page 3 de 29	« Début Préc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suivant Fin »	ActualitésAPPEL DES LEGALISTESExpressionsLus ailleursLiens